ढुक्क हुनुस, चैतदेखि मोबाइल कल सस्तो ! - नेपालबहस
२९ पुस काठमाडौं । के तपाई मोबाइलमा कल गर्दा धेरै पैसा खर्च भयो भनेर तनावमा हुनुहुन्छ ? यदि तेसो हो भने अब ढुक्क हुनुस सरकारले हालै जारी गरेको एउटा निर्दे्शिकाले मोबाइलबाट गरिने कलको मूल्यमा कमी भएको छ ।
एउटा कम्पनीको मोबाइलबाट अर्को कम्पनीको मोबाइलमा कल गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने विज्ञहरूको तर्क छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ’अन्तरआबद्धता निर्दे्शिका २०७६ चैत २० गतेदेखि लागु हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको प्राविधिक भाषामा एउटा कम्पनीको सञ्जालबाट अर्को कम्पनीको सञ्जालमा हुने कल स्थापित गराउने कार्यलाई अन्तरआबद्धता भनिन्छ । त्यसमा लाग्ने शुल्कलाई अन्तरआबद्धता शुल्क भनिन्छ ।
इन्टरनेटको प्रयोग बढेसँगै पीएसटीएन भनिने ल्यान्डलाईन फोन वा मोबाइलबाट हुने कलमै कमी आउन थालेपछि कतिपय देशले यस्तो शुल्क नै हटाएको जानकारले बताएका छन् । नेपालमा भने मोबाइल कलको मूल्य क्रमशस् कम गर्ने सरकारी नीति अनुसार यस्तो शुल्क कम हुने गरी निर्दे्शिका ल्याइएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अन्तरआबद्धता शुल्क कति हुन्छ ?
उक्त निर्दे्शिका अनुसार मोबाइलबाट मोबाइलमा र फिक्स्ड लाइनबाट मोबाइलमा गरिने कलका लागि पहिले तोकिएको भन्दा निकै कम अन्तरआबद्धता दर निर्धारण गरिएको छ । अर्यालका अनुसार अब एउटा सञ्जालको फिक्स्ड लाइनबाट अर्को सञ्जालको मोबाइलमा वा मोबाइलबाट मोबाइलमै कल गर्दा प्रतिमिनेट १० पैसा मात्रै लाग्ने छ । चैत २० सम्म यस्तो कलको दर प्रतिमिनेट ५४ पैसा रहने छ ।
तर प्राधिकरणले एउटा सञ्जालबाट अर्को सञ्जालमा फिक्स्ड लाइनबाट फिक्स्ड लाइनमै वा मोबाइलबाट फिक्स्ड लाइनमा गरिने कलको दर भने पहिलेको भन्दा बढाएको छ । यस्तो कलको दर पहिले १४ पैसा प्रतिमिनेट रहेकोमा अब २० पैसा प्रतिमिनेट बनाइएको छ । अहिले फिक्स्ड लाइन फोनको प्रयोगमा निकै कमी आएको र नेपाल टेलिकम बाहेकका सेवाप्रदायकसँग त्यस्तो सेवा पनि नभएकाले यो व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार अहिले नेपाल टेलिकमको सञ्जालबाट अन्य सेवाप्रदायकका सञ्जालको प्रिपेड मोबाइलबाट फोन गर्दा प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ५० पैसा शुल्क लाग्ने गर्छ । पोस्टपेडका हकमा भने एक रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यो निर्दे्शिका लागु भएपछि प्रिपेडको प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ छ पैसा र पोस्टपेडको ६६ पैसा प्रतिमिनेट शुल्क पर्ने भएको छ ।
एनसेलबाट अन्य सेवाप्रदायकका सञ्जालमा फोन गर्दा हाल दुई रुपैयाँ ५४ पैसा लागिरहेकोमा शुल्क घटेपछि चाहिँ दुई रुपैयाँ १० पैसा मात्र लाग्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले विदेशबाट नेपालमा कल गर्दा निकै महँगो पर्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । तर नयाँ निर्दे्शिका लागु भएपछि त्यसमा केही कमी आउने अधिकारीहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार निर्दे्शिकामा पहिलोपटक विदेशबाट गरिने कलको अन्तरआबद्धता शुल्क पनि तोकिएको छ ।
निर्दे्शिका अनुसार पहिलो वर्षका लागि विदेशबाट आउने कलको अधिकतम अन्तरआबद्धता दर आठ रुपैयाँ प्रतिमिनेट तोकिएको छ । हरेक वर्ष उक्त दर घट्दै जाने उक्त निर्दे्शिकामा उल्लेख छ । त्यस अनुसार आगामी आठ वर्षपछि त्यस्तो दर एक रुपैयाँ ८० पैसा मात्र हुनेछ ।
अघिल्लो लेखज्योति विकास बैंकको बाह्रौँ बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
अर्को लेखअस्ट्रेलियाको डढेलोको धुवाँले पृथ्वी घुम्ने
देशका ७७ स्थानमा फोरजी सेवा
आजदेखि पोखराको प्रदर्शनी केन्द्र नयाँ बजारमा उत्पादन व्यापार मेला
नेपालमा दुई करोड नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा
के तपाईलाई कुनै व्यक्ति तथा संस्थाको टेलिफोन नम्बर चाहियो ?
फाइबर प्रविधिबाट इन्टरनेट र भ्वाइस सेवा